कांग्रेसका पूर्वसांसदले किन लगाए प्रधानमन्त्री ओलीको अबिरमाला ? – Pahilo Page
कांग्रेसका पूर्वसांसदले किन लगाए प्रधानमन्त्री ओलीको अबिरमाला ?
सरकार विकास र समृद्धि ल्याउने लक्ष्यमा अडिग रहेको प्रम ओलीको दावी
५ माघ २०७५, शनिबार २३:११ 698 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ५ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विकास र समृद्धि ल्याउने लक्ष्यमा अडिग रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस त्यागेर आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रवेश गरेका पूर्व सांसद तीर्थराज भुसाललाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेकपाको विधान र घोषणापत्र अनुसार नै सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरु अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । “विकास र समृद्धि नेकपाकै नीति र कार्यक्रमअनुसार आउँछ । यसमा ढुक्क हुनुहोस् । सरकार यही नीति र कार्यक्रमअनुसार अघि बढ्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेकोले अब विकासमा अझ गतिका साथ अगाडि बढ्ने बताए । “संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गर्नुपर्दा अलिकति समय लाग्यो” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कानुन निर्माणका काम सकिएकोले विकासमा थप गतिका साथ अब सरकार अघि बढ्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकतावद्ध भएर अघि बढेको बताएका छन् । “पार्टीमा बहस, विवाद र छलफल हुन्छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “तर निर्णय सर्वसम्मत हुन्छन् ।” पार्टी एकतामा केही ढिलाइ भएपनि अब केही समयमै सबै कमिटीहरुको एकताले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।